Mashandisiro ekushandisa chero chikamu chemufananidzo paApple Watch | Ndinobva mac
Imwe yesarudzo dzatinadzo kwenguva yakareba ndeyekushandisa pikicha (iyo yatinayo pane reel reel) seyepepuru yenzvimbo yeApple Watch. Iyi sarudzo yanga ichiwanikwa kwenguva yakati isingazivikanwe nevashandisi asi iwe unogona nyore kuita chiito ichi uye nhasi uchaona kuti sei. Ehezve haina kuomarara zvachose uye chero pikicha yaunoda inogona kushandiswa senge kumashure kweApple Watch.
Tinofanira kutanga nekucherechedza kuti pane zvakawanda zvingasarudzwa kuti tikwanise kuita chiito ichi, asi isu tichaenda kune yakatwasuka, inova yekuenda kumifananidzo uye kugadzira yedu nharaunda panguva ino. Saka ngatitangei nemufananidzo unoratidza matanho ese atinofanira kuita.
Sezvauri kuona mumufananidzo uri pamusoro, zvaunofanirwa kuita kuve nemufananidzo pane iyo reel reel, zvisinei nzvimbo kana mhando yemufananidzo. Kana tangopinza iyo pikicha isu tinofanirwa kubaya pane yekugovana sarudzo iri pazasi kuruboshwe rwechidzitiro (mativi nemuseve mukati) uye wobva watsvaga sarudzo «Gadzira nharaunda».
Kana tangove nematanho aya isu tinongofanirwa kuratidza kugadzirwa kwayo uyezve tinogona kuwedzera kuomarara kunyangwe iri mu «Sphere Mifananidzo» kana «Sphere Kaleidoscope». Nenhanho idzi dziri nyore uye dzinokurumidza isu tichava nenzvimbo yedu yakagadzirwa. Uye zvakare, ichaiswa zvakananga seyakagadzika nzvimbo pane yedu Apple Tarisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mashandisiro ekushandisa chero sphere pikicha paApple Watch
Pixelmator Pro inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweAppleScript